Raw Boldenone Cypionate vovoka mpanamboatra & mpamatsy - Factory
Vovoka Cypionate vita amin'ny Boldenone (106505-90-2)
Boldenone cypionate vovoka dia androgenic anabolic steroid izay avy amin'ny testosterone. Manana estète cypionate izay miteraka famotsoran-keloka azo tsapain-tanana amin'ny rà mandriaka mandritra ny herinandro 2. Izany dia mahatonga vovobon-tsindrona bolabola ho toy ny steroid mora ampiasain'ny atleta marobe satria tsy toy ny fanaintainana aorian'ny fampidirana. Ny toetra mampiavaka ity vatana ity dia ny halavan'ny vanin-tsolika izay matetika lavitra noho ny fahazoana ny endriky ny androgenic.
Vovon-tsolotsaina vita amin'ny Boldenone Boldenone (106505-90-2)
Vovoka Cypionate vita amin'ny Boldenone (106505-90-2) Description
Ny Boldenone Cyp dia steroid anabolic anabolic izay avy amin'ny testosterone. Manana estète cypionate izay miteraka famotsoran-keloka azo tsapain-tanana amin'ny rà mandriaka mandritra ny herinandro 2. Izany no mahatonga ny vovoka Cypionate Raw Boldenone ho mora ampiasaina ho an'ny atleta maro satria tsy toy ny fanaintainana aorian'ny fampidirana. Ny toetra mampiavaka ity vatana ity dia ny halavan'ny vanin-tsolika izay matetika lavitra noho izany mba hahazoana vokatra hita maso sy hita maso.
Boldenone dia anabolika anabolika anteriora andoogogenika sy synthetic avy amin'ny testosterone izay natsangana ho an'ny fampiasana veterinary. Mety hampitombo ny fihazonana azota, sy ny proteinina, ary ny fiankinan-doha, ary manatsara ny famotsorana erythropoietin amin'ny voa. Boldenone Cyp, avy amin'ny Boldenone, izay misy fiantraikany mitovy amin'ny Boldenone. Ny vovon-tsigara Bolideone Cypionate dia ivon-boldenona ary atolotra ho fanampiana ny fitsaboana ireo soavaly tsy misy ilana azy raha ilaina ny fanatsarana ny lanjany, ny akanjo volom-borona na ny toe-batana ankapobeny.
Vovoka Cypionate vita amin'ny Boldenone (106505-90-2) Specifications
Product Name Vovoka Cypionate vita amin'ny Boldenone (106505-90-2)
Anarana simika 17β-hydroxy-androsta-1,4-dien-3-one cyclopentanpropionate
Brand Name Boldenone Cyclopentanepropionate, Boldenone Cypionate vovoka
Drug Class Fambolena sy fitaovana tsara; Pharmaceuticals; Steroids; boldenone
molekiolan'ny Wvalo 398.58
Color Volo fotsy na fotsy mavo na fotsy mavo
Solubility Saika tsy voakarama ao anaty rano, tsy misy loto amin'ny menaka voajanahary
Boldenone Cyp Application Ho an'ny fambolena sy ny fitsaboana ireo soavylavitra.
Inona ny vovoka Cypionate Raw Boldenone (106505-90-2)?
Boldenone cypionate poème dia esters of boldenone. Estera dia avy amin'ny firaisana ara-nofo ary farafaharatsiny iray ny vondrona alkoxy no maka ny toeran'ny vondrona hydroxyl tokana mba hamorona ny vondrona vaovao. Amin'io tranga io, avy amin'ny testosterone ny molekiolan'ny siramamy boldenone. Miantehitra fifamatorana roa izy io. Boldenone cypionate poème dia endrika noforonina testosterone izay manana fifandraisana roa eo amin'ny 1 sy 2. Izany dia mampihena ny fahafahany mamono ny estrogens sy ny herin'ny anabolika. Izy io dia manana fifandraisana asidin'ny phenylpropionika amin'ny vondrona hydroxyl 17-beta. Vovoka poids Boldenone dia toy ny vovoka, tsy toy ny zavatra hafa tsy dia tsara loatra ary manana tiro maina izay mihamafy ary manjavozavo.
Boldenone dia diabolikan'ny anabolika anabolika ary matetika ampiasaina amin'ny tontolo veterinary noho ny fitsaboana ataon'ny olona. Boldenone Cypionate vovoka, toy ny steroid hafa androgenic anabolic hafa, dia natao hanasongadinana ny vokatry ny testosterone. Manome hery ho an'ny fanorenana tranokala sy ny fampivoarana ara-panatanjahan-tena izy io.
Miankina amin'ny mpanamboatra sy ny firenena izay nanaovana azy io, azo jerena amin'ny endrika matevina na am-bava. Alohan'ny hifidianana izay endrika boldenona, fantaro ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo. Io fahasamihafana io dia ho hita amin'ny alalan'ny ester. Ny Boldenone cypionate vovoka (sy endrika hafa) any Etazonia dia tsy misy afa-tsy ny fampiasana veterinera.
Ahoana ny vovo-dronon'ny Cypionate Row Boldenone (106505-90-2) asa
Ny Estera cypionate dia niraikitra tamin'ny Boldenone tamin'ny labozina indrindra tany ambanin'ny tany, mba hampihenana ny antsasaky ny androm-piainany amin'ny fihenam-bidy bebe kokoa ho an'ireo mpanao biriky sy atleta. Estera dia singa mifamatotra amin'ny fanafody fototra izay manova ny tahan'ny fitsaboana io zava-mahadomelina io rehefa tafiditra ao anaty rà. Ireo esters samihafa dia mifehy ny fihoaram-pefy na tsikelikely ny fanafody na entin'ny vatana. Estera koa dia manana fiantraikany goavana amin'ny halavan'ny fotoana ny famokarana zava-mahadomelina ao amin'ny vatana mandritra ny fotoana fohy.
Ohatra, ny esters sasany dia mamela ny fitsaboana haingana ny zava-mahadomelina ao amin'ny vatana fa ny vokany dia tsy maharitra ela. Ny hafa dia manamaivana ny famotsorana ny zava-mahadomelina ao amin'ny vatana ka ny fiantraikany amin'ny andro farany na herinandro mihitsy aza indraindray. Ny halavan'ny asa atao amin'ny zava-mahadomelina, toy ny vovon-tsololona Boldenone, dia isaina amin'ny antsasaky ny androm-piainany. Ho an'ny mpanao biriky, zava-dehibe ny antsasaky ny fiainana. Ho ela kokoa ny antsasaky ny fiainana, ny kely vidy na ny dosage dia ilaina.
Vovon-tsolika vita amin'ny Boldenone Cypionate (106505-90-2) Dosage
Ny fikarakarana dosie mety ho an'ny Boldenone dia mety ho sarotra satria maro ireo antony hafa ho an'ny vokatra toy izany. Ny mpampiasa sasany dia mahita ny fiovana amin'ny herinandro faharoa na fahatelo. Ny hafa milaza fa mila mampiasa azy mandritra ny herinandro efatra ka hatramin'ny dimy ho an'ny vokatra tsara indrindra.
Ny dosages averina dia 100 mg, ny sasany milaza fa tsy misy zavatra hafa, toy ny 50 mg. Tsy hisy vokany be izany raha tsy ampidirina amin'ny endrika endrika testosterone. Ny mpamboly amin'ny fampiasana vovo-dronono Boldenone dia matetika ampiasaina hampiasa azy io amin'ny fampiasana azy io amin'ny fampiasana poids cypionate testosterone satria manome ny valiny mitovy ihany koa momba ny anton'asa mafana sy maharitra.
Ny bakteria ampiasaina amin'ny Equipoise (Boldenone undecylenate) dia mijanona ao anatin'ny 200 mg ka hatramin'ny 400 mg isan-kerinandro, manasaraka ny dosage ao amin'ny injections roa na telo mba hisorohana ny vokatra hafa toy ny hoditry ny hoditra na ny fanaintainana eo an-toerana. , arakaraka ny safidy manokana, dia afaka maharitra na amin'ny enina hatramin'ny 12 herinandro na maharitra.
Vovoka Cypionate vita amin'ny Boldenone (106505-90-2) soa
Boldenone Cypionate dia version matanjaka Boldenone Undecyclenate. Mahery lavitra noho ny version Undecyclenate izany. Boldenone Cypionate dia hanome anao tombony betsaka amin'ny proteinina ao anatin'ny sakafo tsy misy rano fisotro. Koa satria ny ranomamy dia tsy mandray anjara betsaka amin'ny lanjan'ny hozatra, ny ankabeazan'ny habetsa azo avy amin'ny tsingerin'ny Boldenon Cypionate dia azo averina rehefa tapitra ny fanafody.
Buy BOldenone Cypionate poana avy amin'ny Buyaas.com
Vola madinika Boldenone (846-48-0)
Row Boldenone Undecylenate (Equipoise) vovoka (13103-34-9)
Rano Acetate vita amin'ny Boldenone (2363-59-9)